Ngokuqinisekile ngamunye wethu kwakudingeka abhekane nesimiso nenkinga enjalo, njengoba ithebhu evaliwe, uma kungekhona kweseshini. It kudala izinkinga eziningi kanye izimo, ikakhulukazi uma kukhumbule hhayi ukuthi yiluphi ulwazi ibhekwa. Ake sixoxe ngendlela ukubuyisela ithebhu evaliwe.
Asikhumbule thina nokuthi ungayibuyisela yakamuva isiphequluli kweseshini, ngoba futhi enye yezinkinga eziyinhloko ezibhekene abasebenzisi computer.
Kungani-ke kwenzekani? Ezimweni eziningi, impendulo ilula. Ngokuvamile umuntu ebhekene nenkinga enjalo, lapho ngephutha ivaliwe ithebhu. Indlela ukubabuyisela kulesi simo? Ngempela, kaningi kwenzeka ngengozi - hhayi ukubeka izinto engalweni, ecabanga. Ngaphansi ngokuvamile, isizathu salokhu kungaba ukwehluleka ohlelweni. Nokho, lawa amacala aqhelelene, ancike impilo ikhompyutha.
Kunoma yikuphi, uma kunenkinga, wena at ukulahlekelwa ebuka esibukweni, sizibuza ukuthi singenzani esilandelayo? Kungakhathaliseki ukucinga wonke futhi, noma ngokushesha ukuthola ukuthi ukuze ulungise leli phutha. Sikunikeza indlela yesithathu - ukulungisa yonke into ambalwa.
Buyisela ithebhu odlule
Nokho kuhlulekile, futhi ucabanga kanjani ukubuyisela zokugcina ithebhu evaliwe. Kunendlela sasivumela elula nephumelelayo. Konke kwenziwa ngosizo okuthiwa okhiye ashisayo. Noma yimuphi isiphequluli inhlanganisela yokhiye Ctlr + Shift + T. Le nhlanganisela kuvula ke ikhasi lokugcina avaliwe.
Njengoba ubona, konke kakhulu, silula. Lo msebenzi kuthatha imizuzwana embalwa kuphela, kodwa inhlanganisela self ukukhumbula izinto kalula. Nokho, zikhona izimo lapho le ndlela ngeke isebenze. Empeleni uma ikhasi yavalwa ngisemncane kakhulu.
Vula ithebhu ivaliwe ngaphambili
Manje cabanga lapho singamukelwa ngifuna zinyanga ithebhu evaliwe. Kuyaphawuleka ukuthi kungaba kokubili ivaliwe kulesi sikhathi, futhi lowo odlule. Indlela ukubuyisela ithebhu kulesi simo? Kukhona izinketho ezimbili kukhona.
Indlelanchubo yekusebentisa kuqala uma kwenzeka ukuthi uma uvula kuphela amakhasi ambalwa kulesi sikhathi. Kulesi amathebhu avaliwe futhi kufanele kube esengxenyeni. Samane uqale ngokucindezela Ctlr + Shift + T nje esibukweni akuyona ulwazi oludingayo uboniswa. Le ndlela kufanelekile kuphela uma kwadingeka nje Amakhasi avaliwe 3-4. Uma ngaphezulu - ukuthi le nqubo kungenzeka zingakhululeki, nzima futhi ubuqotho.
Thina esiphethweni kanjani ukubuyisela ithebhu uma uvaliwe kuseshini. Godu kuthiwani nengabe kwatholakala ngaphambili kakhulu noma ekuqaleni lesi sikhathi? Kulokhu, sincoma ukuthi usebenzise umlando isiphequluli uphinde uyithole khona. Ngokuvamile, ulwazi Kulula ukuthola imenyu isiphequluli noma ngokucindezela sekhibhodi Ctrl + Shift + H.
Izici Buyisa amathebhu
Ngakho, sizokwenza iqhinga ukubuyisela ithebhu evaliwe. Manje asikhulume ngalokho izici e amathebhu idatha. Lapha sizobe ukusho into ebaluleke eyodwa kuphela. Ukubuyisela ithebhu, ungaya Amakhasi eziye kwake wathola lapha. Isiphequluli ugcina umlando ukuhwebelana futhi kwenza kube litholakale kubasebenzisi.
Siphinde uqaphele ukuthi kungenzeka ukubuyisela ikhasi isiphequluli isiqalo njengoba izindlela ezichazwe ngenhla, kanye ukuvula iwindi elisha. Ngakho-ke, uma bebhekene nenkinga ye nendlela alulame "Yandex" ithebhu, okuyinto ekhaya kwabaningi, sikucebisa ukuthi vele uvule ewindini elisha lesiphequluli. Lokhu kuyokwenza ugcine isikhathi esiningi. Kungenjalo, ungasebenzisa izindlela ezichazwe ngenhla, kodwa kungase kuthathe isikhathi nomzamo owengeziwe.
Sesihlole kanjani ukubuyisela ithebhu kungakhathaliseki ukuthi yavalwa nje kule noma iseshini yokugcina. Manje ake sixoxe enye inkinga engavela kusuka kunoma ubani kithi.
Kaningi yokuthi izingozi session - ukuphahlazeka kusiphequluli, ikhompyutha, ipulaki, yekhwalithi ephansi amasayithi, shaqa computer ukuze yezizathu ezihlukahlukene, nokunye. Kwenzeka futhi ukuthi sifuna ukuvala ikhasi elilodwa nje, futhi ngephutha uvala iwindi isiphequluli nokuqukethwe. Manje ake sixoxe nje kuphela indlela ukubuyisela ekhasini elilodwa, futhi kakade mayelana nendlela ukubuyela sonke isimiso nge amathebhu ngaphambilini evulekile.
Into yokuqala siphawula ukuthi uma kukhona khona Ukuvalwa eziphuthumayo isiphequluli, ezimweni eziningi, uma uvula uhlelo inikeza ukubuyisela kweseshini zokugcina. Lona ikhambi iningi elula inkinga yakho.
Eyesibili inketho - ukufaka imenyu isiphequluli, ukhethe "Umlando" futhi uthole esincane "Buyisela iseshini yokugcina."
Ukuze uvimbele Ukuvalwa ngephutha esimisweni iphutha yakho, sincoma ukuthi ngokushesha iya okhethweni isiphequluli sakho, futhi "Amathebhu" ukubeka ane-ayikhoni eduze emgqeni 'Ngixwayise mayelana ukuvala amathebhu amaningi ". Ngakho, uma ngephutha uchofoze inkinobho eduze, kuqala ubuza, futhi uma uqinisekile ukuthi ufuna ukukhubaza Amakhasi amaningi ngesikhathi esisodwa.
Abasebenzisi abaningi PC ngokwenkolo avame ukubhekana nayo inkinga kanjani ukubuyisela ithebhu evaliwe, uma kungekhona lonke session. Ngokuvamile lokhu kungenxa amaphutha, ukunganaki nokuhluleka kusiphequluli noma ikhompyutha.
Naphezu kweqiniso lokuthi inkinga ibonakala nzima, kube zingaxazululwa e ambalwa. Odinga ukwazi - ezinye inhlanganisela okhiye, ngokuthi ashisayo, futhi wakwazi ukubangela imenyu isiphequluli, futhi ukuphequlula umlando. Zonke izindlela ukubuyisela amathebhu avaliwe zazibizwa kulesi sihloko. Sithemba le nto kwaba wusizo kuwe.
Realtor - sikhona ukuze mkhakha? Ubuqili realtor umsebenzi
Yokuzala abesifazane. Yini okufanele ngiyazi?
Zhdanovskoye echibini: incazelo, izici, izithombe